Firenena azo ekena visa e-Visa | Fahazoan-dàlana ho an'ny Visa amin'ny Internet any India
Firenena azo ekena e-Visa any India
Ilaina ny fahazoana mandray e-Visa any India alohan'ny ahafahanao mampihatra sy mahazo alalana ilaina hidirana ao India.
Ny e-Visa any India dia azon'ny olom-pirenena efa ho 175 firenena izao. Midika izany fa tsy mila mangataka Visa mahazatra ianao raha mikasa ny hitsidika fizahan-tany, raharaham-barotra na fitsidihana ara-pitsaboana. Azonao atao ny mangataka fotsiny amin'ny Internet ary mahazo alalana fidirana ilaina hitsidihana an'i India.
Ireto misy hevitra mahasoa momba ny e-Visa dia:
Ilay e-Visa mpizahatany ho any India azo ampiharina mandritra ny 30 andro, 1 taona ary 5 taona - izany dia mamela fidirana maro ao anatin'ny taona kalandrie
Business e-Visa ho an'i India ary E-Visa ara-pitsaboana ho an'ny India samy manan-kery mandritra ny 1 taona ary mamela fidirana maro
Ny e-Visa dia tsy azo ovaina, tsy azo ovaina
Tsy voatery hanana porofo momba ny famandrihana hotely na tapakila sidina ny mpandeha iraisam-pirenena. Na izany aza, ny porofon'ny vola ampy holaniana mandritra ny fijanonany any India dia manampy.
Ny olom-pirenena amin'ireto firenena manaraka ireto dia afaka mangataka fangatahana e-Visa any India:
Tsindrio eto raha hamaky momba Documents Required ho an'ny e-Visa Indiana.